Dayhaps အွန်လိုင်းပြက္ခဒိန် | ရွှေ Web ကိုဆုပေးပွဲ
အားဖြင့် ဂွ | ဧပြီ 10, 2013 | ဆုချီးမြှင့် Winners |0မှတ်ချက်များ
Dayhaps ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုမှုများအတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်းပြက္ခဒိန်ဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျဖနျတီးနိုငျဘယ်မှာ, ရှယ်ယာနှင့်အွန်လိုင်းပြက္ခဒိန်များအတိုင်းလိုက်နာနှင့်သင့်မိတ်ဆွေများဖိတ်စာပေးပို့!
Dayhaps B.V. နယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတစ် startup ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အသုံးပြုသူများနှင့် Sillicon ချိုင့်ဖို့ကိုတိုးချဲ့.
ကျနော်တို့အုပ်စုတစုပြက္ခဒိန်ရိုးရှင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်သင့်ယုံကြည်သောကြောင့်. ကျနော်တို့ကတည်ဆောက်လူတိုင်းနှင့်အတူမျှဝေဖို့ကိုချစ်. အဘယ်ကြောင့်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Dayhaps? ကောင်းစွာ, Dayhaps ထံမှလာ “နေ့ဖြစ်ပျက်”, Haps ဖြစ်ပျက်အတိုကောက်ဘယ်မှာ.
Dayhaps ရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုယ်တော်တိုင်လိုအပ်သူတစ်ဦးယောက်ျားတစ်ယောက်ကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်. အတွေ့အကြုံရှိ developer များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူသူကယ့်ကိုရိုးရှင်းအုပ်စုသည်ပြက္ခဒိန်သည်အဘယ်အရာ၏အသစ်တခုအဓိပ်ပာယျကိုဆောင်ခဲ့.